Caamsaa 29, 2018
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa galaan magaalaa gabaa roobii ganda 21 jedhamu keessa jiraataa kan turan obbo Ahimed Jibril hidhattoota mootummaan dilbata ganama barii rasaasaan dha’amanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni naannoo fi maatiin isaanii fi bulchiinsi aanaa Sanaa nuuf himaniiru. Obbo Ahimed nama nagaa hawaasa keessatti jaaltamaa ta’uun gabaasameera.
Haati warraa obbo Ahimed aadde Caaltuu yooyyaa akka jedhanitti ganama barii akka lakkoobsa Itiyoophiyaa sa’aati 11tti namoonni hidhatan dhufanii cufaa nutti rukutanii bani jedhanii erga bansiisanii booda itti dhukaasan jedhan.
Bulchaan godina Hawwaa Galaan obbo Mittikkuu Lammeessaa illee obbo Ahimed Jibril nama nagaa hawaasi dhugaa ba’aaf jedhan. Maaliif akka ajjeefaaman nuufis gaaffii dha. Namoonni shakkaman to’annaa jala oolanii jiru. Poolisiinis dhimma isaa qorataa jira jedhan.